शुक्र | अक्टोबर 2021
चन्द्रमाको कन्जेक्ट वीनसको अर्थ के हो?
चन्द्रमाको कन्जेक्ट वीनसको अर्थ के हो? चंद्र कन्जेक्ट भेनस ट्रान्जिटले तपाईंको जीवनमा शान्ति र सद्भाव ल्याउँछ। तपाईं भावनात्मक, हेरचाह र मायालु महसुस गर्नुहुनेछ। यो प्रियजनहरू वा साथीहरूसँग पार्टीमा आराम गर्नको लागि उत्तम समय हो। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुन्छ र सामान्य भन्दा बढी यौन आकर्षक हुनुहोस्। तपाईं राम्रो उर्जामा बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ जस्तै love.29 बनाउने। २०१।
के मेरो शुक्र सँगै नेप्च्यून छ?
के मेरो शुक्र सँगै नेप्च्यून छ? भेनस कन्जेक्ट नेप्च्यून जन्म तपाईलाई एक रोमान्टिक, एक आदर्शवादी र सपना देख्ने बनाउँदछ। तपाईको लागि कसैको टाउकोमा टाउको छिर्न यो धेरै नै सजिलो हुन्छ, र तपाईंको समानुभूति र अनुकम्पा प्रशंसा गर्न सकिन्छ। २०१।।
यसको मतलब के हो जब कुनै ग्रह ज्योतिषमा सीमित हुँदैन?
यसको मतलब के हो जब कुनै ग्रह ज्योतिषमा सीमित हुँदैन? कुनै ग्रहलाई सीमा भन्दा बाहिरको वर्गमा वर्गीकृत गर्नका लागि, सूर्य र चन्द्रमाद्वारा बनाइएको ग्रहण पथको साथ, आकाशको एक पट्टीमा आकाशको एउटा स्ट्रिपमा अवस्थित उच्च वा तल्लो कोणमा हाम्रो आकाशको बीचमा यात्रा गर्नुपर्दछ। पहिलो ज्योतिषीहरूले ताराहरू चल्दैछन् भनेर उल्लेख गरे ...
सूर्य समानान्तर शुक्रको अर्थ के हो?
सूर्य समानान्तर शुक्रको अर्थ के हो? जन्मजात चार्टमा सूर्य कन्ज्याक्ट वीनसका मानिसहरुको आत्मसम्मान बाँधिएको हुन्छ अरुले प्रेम गर्नु पर्ने आवश्यकता संग। उनीहरूको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र उनीहरूको सम्बन्धहरूको आनन्द लिने बीच कडा झगडा छ। सूर्य मेष, कर्क, लियो, वृश्चिक र धनुमा शुक्र भन्दा पनि शक्तिशाली छ।
सेमिसेक्स्टाइलले ज्योतिषमा के भन्न खोजेको हो? प्रतीक अर्ध सेक्स्टाइल। दुई ग्रहहरूको बिच 30० डिग्रीको पक्ष। अर्ध सेक्स्टाइल एक सानो पक्ष को रूप मा मानिन्छ। यो विरलै व्याख्यामा सामेल गरिएको छ, किनभने किनभने degrees० डिग्रीको एकाइहरु भिन्न अर्थ भएका प्रमुख पक्षहरुको अपरिष्कृत भवन ब्लाक हो।
यसको मतलब के हो जब तपाईंको सूर्य र शुक्र एकै चिन्ह छन्?
यसको मतलब के हो जब तपाईंको सूर्य र शुक्र एकै चिन्ह छन्? यदि शुक्र तपाईंको सूर्यको रूपमा उस्तै चिन्हमा छ भने: मूल रूपमा, यदि तपाईंको सूर्य र शुक्र एकै चिन्हमा छन् भने, तपाईंको व्यक्तित्व र सम्बन्धहरूको प्रकारहरू बीच स्पष्ट सम्बन्ध छ जुन तपाईं खोज्नुहुन्छ। तपाईं पनि सजिलै अरूलाई स्नेह व्यक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। २०२०।
सूर्य कंज्याक्ट शुक्रको अर्थ के हो?
जब वीनस ट्रान्जिट हुन्छ तब के हुन्छ?
जब वीनस ट्रान्जिट हुन्छ तब के हुन्छ? शुक्र पार गर्दै शुक्र ग्रह एक स्थानमा हुन्छ जब शुक्र ग्रह सूर्य र एक उत्तम ग्रहको बीचमा सीधै जान्छ र सूर्यको डिस्कको बिरुद्दमा देखापर्ने हुन्छ (र यसैले यसको सानो अंशलाई पनि अस्पष्ट बनाउँछ)। ट्रान्जिटको अवधिमा, शुक्रलाई पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ सूर्यको अनुहारमा सर्दै गरेको सानो कालो थोप्लोको रूपमा।
कसरी वीनस प्रतिगामी २०२० लाई असर गर्छ?
कसरी वीनस प्रतिगामी २०२० लाई असर गर्छ? भेनस प्रतिगामी समयमा, हामी प्रेम, पैसा, र सौन्दर्य को दायरा मा भ्रम र मिश्रित सन्देशहरूको सामना गर्न सक्दछौं र ती क्षेत्रहरुमा निर्णय लिने प्रवण हुन्छ जुन नयाँ सम्बन्धमा टुक्रिने जस्तै बनाइएको छैन जुन स्पष्ट रुपमा बर्बाद भएको छ, एक अज्ञात भूतपूर्व फिर्ता लिदै, एक व्यर्थ खरीदमा स्प्लुगिंग हामी ... '१ 20 २०२०।
कुम्भमा रहेको मंगल कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ?
कुम्भमा रहेको मंगल कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ? कुम्भमा मंगल ग्रहका मानिस कुम्भ, मिथुन, तुला र लियोमा शुक्रको साथ यौन आकर्षित हुन्छन्।
क्यान्सरमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ?
क्यान्सरमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ? क्यान्सरमा मंगल ग्रह महिलाहरू मीठा र संवेदनशील केटाप्रति आकर्षित हुन्छन् जसले उनीहरूलाई भावनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्छन्। क्यान्सरका म men्गलमा पुरुषहरू यस संवेदनशीलतालाई लोभ्याउँछन् र उनीहरूलाई ख्याल गर्नेहरूप्रति धेरै नम्र छन्। सबैभन्दा माथि, क्यान्सरमा मंगल ग्रहको साथ तपाईं भावनात्मक ईमान्दारीमा आकर्षित हुनुभयो ।.4। २०२०।
मकरमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ?
मकरमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ? मार्क क्यापरिक अट्र्याक्ट्स: मकरमा मंगल ग्रहका व्यक्तिहरू मकर, वृषभ, कन्या र क्यान्सरमा शुक्रसँगै यौन आकर्षण गर्छन्।
लियोमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो?
लियोमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो? लियो महिलामा रहेको मंगल ग्रह सबै चीजहरूका लागि आकर्षक र आकर्षक छ। उनी कोठाको सब भन्दा ठूलो, सबैभन्दा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा तिर तानिनेछन्। उनी बलियो हुनुहुन्छ कोही चाहान्छिन्। लियो महिलामा मंगल ग्रह कमजोरीहरूमा आकर्षित हुँदैन; उनी सक्षम पार्टनर चाहान्छिन् जसले उनीहरूको आफ्नै दिमाग जान्दछ। २०२१
मेषमा रहेको भुनस कुन कुरामा आकर्षित भयो?
मेषमा रहेको भुनस कुन कुरामा आकर्षित भयो? मेष राशिमा भ्निनस भएको मानिस पुरुष, स्वाधीन र स्वतन्त्र उत्साहका महिलाहरुप्रति आकर्षित हुन्छ। उनको आदर्श महिला ऊर्जावान र स्वतन्त्र छ। उसलाई एउटी आइमाई चाहिन्छ जसको आफ्नै रुचि हो र उहाँमा धेरै निर्भर छैन। २०१।
मेषमा मंगलबार कुन कुरामा आकर्षित भयो?
मेषमा मंगलबार कुन कुरामा आकर्षित भयो? मेषमा मंगलबार भएको महिला माचो, पुरुष पुरुषहरूप्रति आकर्षित हुन्छिन्। उनी एक मानिस चाहान्छिन् जो एक बलियो र आक्रामक छ र कमजोर वा डरलाग्दो मानिसहरु द्वारा बन्द गरिएको छ। २०१।
मिथुनमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो?
मिथुनमा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो? मिथुन आक्रमणमा मार्स: मिथुनमा मंगल ग्रहका मानिस मिथुन, तुला, कुंभ र धनुमा शुक्र रहेको व्यक्तिसँग यौन आकर्षण गर्छन्।
तुलामा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो?
तुलामा मंगल ग्रह कुन कुरामा आकर्षित भयो? तुलामा मंगल ग्रह सबै चीजहरू आकर्षण र सुन्दर देखि आकर्षित हुन्छ। तुलालाई एक उत्तम सौन्दर्य मन पर्छ जुन लगभग कलात्मक हुन्छ, जस्तै मानव अनुहारको पूर्णता। तुलामा मंगलबार (मर्दाना उर्जाको साथ) भित्र र बाहिर सौन्दर्यतर्फ आकर्षित हुनेछन् ।१।। २०२०।